တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်း - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဘုရားသခင့်ဘုရားကျောင်းဆွစ်ဇာလန်
ဆောင်းပါး > အနာဂတ် > တစ်ဦးတည်းသာလမ်း?
ဘာသာတရားအများစုသည်သီးသန့်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ သြသဒေါက်ဂျူးများသည်သူတို့လမ်းမှန်ရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။ မွတ်စ်လင်မ်များသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှအကောင်းဆုံးဖွင့်ဟချက်ရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။ ဟိန္ဒူတွေကသူတို့မှန်တယ်လို့ယုံကြည်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကသူတို့လုပ်တာကိုယုံကြည်ကြတယ်၊ ဒါကမှန်တယ်လို့သူတို့ထင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မအံ့သြသင့်ဘူး။ ခေတ်သစ်ဗဟုဝါဒီများပင်လျှင်ဗဟုဝါဒသည်အခြားအတွေးအခေါ်များထက် ပို၍ မှန်ကန်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
အားလုံးလမ်းများတူညီသောဘုရားသခင်အား ဦး ဆောင်လမ်းပြကြပါဘူး။ ကွဲပြားသောဘာသာတရားများသည်ကွဲပြားသောဘုရားများကိုပင်ဖော်ပြကြသည်။ ဟိန္ဒူဘုရားများတွင်နတ်ဘုရားများစွာရှိပြီးကယ်တင်ခြင်းသည်အချည်းနှီးသာဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ သူတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းကနောက်ဆုံးမှာအတူတူပန်းတိုင်ဆီသို့ ဦး တည်သွားမယ်ဆိုတာကိုမွတ်စလင်ရောဟိန္ဒူတွေကပါသဘောမတူကြဘူး။ သူတို့ကပြောင်းလဲမှုထက်တိုက်ခိုက်ကြလိမ့်မည်။ ဗဟုဝါးဝါးများမမှားစေလိုသောယုံကြည်မှုများကိုတွန်းအားပေးရန်အတွက်အနောက်ဗဟုဝါဒကိုဖြုန်းတီးခြင်းနှင့်လျစ်လျူရှုခြင်းအဖြစ်ပယ်ချလိမ့်မည်။ ခရစ်ယာန် ospel ၀ ံဂေလိတရားသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်လူတို့အား၎င်းကိုမယုံကြည်ရန်ခွင့်ပြုသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့နားလည်သည်နှင့်အမျှယုံကြည်မှုသည်လူတို့အားမယုံကြည်ရန်လွတ်လပ်သည်ဟုယူဆသည်။ ဒါပေမယ့်လူတွေကိုသူတို့ရွေးချယ်တဲ့အတိုင်းယုံကြည်ခွင့်ကိုပေးနေပေမဲ့၊ ဒါကယုံကြည်ချက်အားလုံးမှန်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ သူတစ်ပါးအားယုံကြည်ရန်ခွင့်ပြုခြင်းသည်သူတို့လိုလားသောအရာအဖြစ်လက်ခံခြင်းသည်သခင်ယေရှုသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ခြင်းကိုရပ်တန့်သွားမည်ဟုမဆိုလိုပါ။
Petrus war gleichermassen deutlich, als er zu den Führern der Juden sagte: ... in keinem andern ist das Heil, auch ist kein andrer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden (Apostelgeschichte 4,12). Paulus machte es auch klar, als er sagte, dass Menschen, die Christus nicht kennen tot sind in ihren Übertretungen und Sünden (Epheser 2,1). Sie haben keine Hoffnung und trotz ihrer religiösen Glaubensbekenntnisse keine Verbindung zu Gott (V. 12). Es gibt nur einen Mittler, sagte er – nur einen einzigen Weg zu Gott (1. တိမောသေ 2,5). Jesus war das Lösegeld, das jeder Mensch braucht (1. တိမောသေ 4,10). Wenn es irgendein anderes Gesetz oder irgendeinen anderen Weg gäbe, der das Heil anbietet, dann würde Gott das getan haben (Galater 3,21).
ဘာသာတရားအများစုကအလုပ်အကိုင်အချို့ကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောလမ်းဟုသင်ကြားသည်။ မှန်ကန်သောဆုတောင်းခြင်းများ၊ မှန်ကန်သောအရာများကိုမျှော်လင့်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ အကယ်၍ သူတို့သည်လုံ့လဝီရိယရှိရှိအလုပ်လုပ်လျှင်လူများသည်ကောင်းနိုင်သည်ဟုသင်ကြားသည် သို့သော်ခရစ်ယာန်ဘာသာကကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့ပြုသည်ဖြစ်စေ၊ မည်မျှပင်ကြိုးစားပါစေကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ကျေးဇူးရှိရန်လိုအပ်သည်ဟုသွန်သင်သည်။ အတွေးအမြင်နှစ်ခုစလုံးသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်မှန်ကန်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ကျေးဇူးတော်အယူဝါဒသည်၎င်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်ဖြစ်စေ၊ ကယ်တင်ခြင်းရရန်အခြားလမ်းမရှိကြောင်းဖော်ပြထားသည်။
ယေရှုအကြောင်းမကြားဘဲသေဆုံးသွားသူတွေကော။ မိုင်ထောင်ချီဝေးသောပြည်တွင်ယေရှုမတိုင်မီမွေးဖွားလာသူများနှင့် ပတ်သက်၍ ကောအသို့နည်း။ မင်းမှာမျှော်လင့်ချက်ရှိလား
Ja, genau deshalb, weil das christliche Evangelium das Evangelium der Gnade ist. Menschen werden durch Gottes Gnade gerettet, nicht indem sie den Namen Jesus aussprechen oder spezielle Erkenntnis oder spezielle Formeln haben. Jesus starb für die Sünden der ganzen Welt, ob die Menschen es wissen oder nicht (2. ကောရိန္သု 5,14; 1. ဂျိုဟန် 2,2). Sein Tod war ein Sühneopfer für jeden – in der Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, für den Palästinenser genauso wie für den Bolivianer.
Wir sind voll Zuversicht, dass Gott zu seinem Wort steht, wenn er sagt, dass er will, dass jedermann zur Busse finde (2. ဓာတ်ဆီ 3,9). Auch wenn seine Wege und Zeiten für uns oft unsichtbar sind, vertrauen wir ihm dennoch, dass er die Menschen liebt, die er geschaffen hat.
အကယ်၍ လူများသည်လုပ်ရပ်များ၊ တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်း၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ ကိုယ်ကျိုးစွန့်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားလူ့နည်းဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းရရန်စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ကြိုးစားခဲ့ပါကသူတို့၏အကျင့်များသည်ဘုရားသခင်နှင့်မထိုက်တန်ကြောင်းတွေ့ရှိလိမ့်မည်။ ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးတော်အားဖြင့်သာလျှင်ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ရရှိသည်။ ခရစ်ယာန် ospel ၀ ံဂေလိတရားကမည်သူမျှကယ်တင်ခြင်းကိုမထိုက်တန်ဟုသွန်သင်သော်လည်း၎င်းသည်လူတိုင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ လူတစ် ဦး သည်မည်သည့်ဘာသာရေးလမ်းကြောင်းကိုသွားသည်ဖြစ်စေခရစ်တော်သည်သူ့ကိုလမ်းမှ ကယ်တင်၍ သူ၏လမ်းပေါ်သို့ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်။ သူသည်လူသားအားလုံးလိုအပ်သည့်တစ်ခုတည်းသောအပြစ်ဖြေရာယဇ်ကိုဘုရားသခင်ပေးသောတစ်ခုတည်းသောဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်နှင့်ကယ်တင်ခြင်း၏ထူးခြားသောလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုယေရှုကိုယ်တိုင်အမှန်တရားအဖြစ်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ယေရှုသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်တစ်ခုတည်းသော၊ အားလုံးပါ ၀ င်သော၊ ကျဉ်းမြောင်းသောလမ်းနှင့်လောကီသားအပေါင်းတို့၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်သောတစ်ခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ယေရှုခရစ်၌ကျွန်ုပ်တို့အကောင်းဆုံးမြင်တွေ့ရသောဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်သည်လူတိုင်းလိုအပ်သောအရာဖြစ်သည်။ သတင်းကောင်းမှာ၎င်းကိုလူတိုင်းအတွက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောသတင်းနှင့်မျှဝေရကျိုးနပ်သည် - ၎င်းသည်စဉ်းစားသင့်သောအရာဖြစ်သည်။